के हो ओभरड्राफ्ट कर्जा, अरु कर्जा भन्दा के फरक छ यसमा ? - Everest Dainik - News from Nepal
के हो ओभरड्राफ्ट कर्जा, अरु कर्जा भन्दा के फरक छ यसमा ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले बिभिन्न किसिमका कर्जा दिने गर्दछन् । यी कर्जाहरु यसको प्रकृतिका आधारमा फरक फरक हुन्छन् ।
ओभर ड्राफ्ट कर्जा भन्नाले बैंकले धितो या जमानत भन्दा बढी कर्जा दिने प्रक्रिया हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यसलाई अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा समेत भनेको हुन्छ । तर आमरुपमा भने यो निकै प्रचलित छ ।
आजभोली प्रायः बैंकहरुले ओभरड्राफ्ट सुविधा दिन्छन् । बैंकहरुले करेन्ट एकाउन्ट, स्यालरी एकाउन्ट वा फिक्स्ड डिपोजिटमा यस्तो सुविधा दिन्छन् । यसअन्तर्गत, ओभरड्राफ्ट सुविधा भएका खातावालहरुले पछि व्याजसहित फिर्ता गर्ने गरी आफूलाई आवश्यक परेको पैसा लिन सक्छन् ।
ओभरड्राफ्ट कर्जा लिने प्रक्रिया अरु प्रक्रिया लिने जस्तै हुन्छ । बैंकमा एकाउन्ट पहिले नै भएकाहरुका लागि यस्तो कर्जा लिन सजिलो हुन्छ, नत्र धितो राख्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट शीर्षकको कर्जालाई अनुत्पादक मानेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कुल कर्जाको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२ वर्षअघिसम्म व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा १ करोड थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त सीमालाई पहिलो ७५ लाख हुँदै ५० लाखमा झारेको छ । अहिले कुनैपनि व्यक्तिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै ओभरड्राफ्ट सुविधा पाउँछन् ।
२०७४ माघमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ओभरड्राफ्ट शिर्षकबाट दिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
ट्याग्स: Over draft loan, ओभरड्राफ्ट कर्जा